Pandoc na ihe omuma a na-amaghi | Site na Linux
Pandoc na amaghi ebube
mgbochi | | GNU / Linux
Oge ikpeazụ m kwuru banyere Haskell bụ na otu isiokwu banyere XMonad. Agbanyeghị, ọ bụghị naanị ihe dị ịtụnanya n'ụwa m na-ewetara gị.
O doro anya na onye ọ bụla maraworị Markdown, na ọ bụrụ na mụ ewetaghị ha. Ọ bụ asụsụ akara ngosi ọkụ nke na-enyere anyị aka ịdị ọsọ ọsọ ma rụpụta ọrụ karịa mgbe edere ederede. Zuru ugbu a.
Ọfọn, Markdown abụghị naanị ya na enwere ọtụtụ asụsụ n'ebe ahụ iji mee otu ọrụ ahụ. Nọmalị onye ọ bụla na-eji echiche nke iwe ederede doro anya na akara ụfọdụ ma nyefee ya ka ọ bụrụ HTML, LaTex na ndị ọzọ. Ihe ọma niile ruo ebe ahụ.
Nke a na-eweta ọtụtụ nsogbu. Nke mbụ, na nke kachasị mkpa, ụfọdụ mmejuputa iwu enweghị niile atụmatụ anyị chọrọ. Ma ọ bụ asụsụ akara ngosi nke tinyegoro nke a anyị achọghị.
Na tupu anyị ejide anyị na isi-ike, ị ga-eche ma ghọta na enwere ụzọ ka mma. Ihe na-eme ka asụsụ nsụgharị ọ bụla ghọọ ihe ọzọ. Onye ọ bụla.
Nke a bụ ebe Haskell batara na foto a. Ihe ịtụnanya m na-ekwu maka ya dị, ọ dị ndụ, o nwere aha, ọ na-arụ ọrụ na ọ dị ịtụnanya. Na-akpọ onwe ya Pandoc o si n'aka onye ọkà ihe ọmụma si Mahadum Berkeley, John MacFarlane. Jide, n'ihi na ihe ọma na-amalite.
1 Na-emegide ihe niile
3 Nnennen ruo isi
3.1 Na dependency hell
4 Jiri na nkwubi okwu
Na-emegide ihe niile
Anyị nwere ike ịtụ anya na pandoc na-enye mediocre mkpuchi nke ihe niile, site na itinye uche. Ma ọ dịghị. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee arụmọrụ dị ịtụnanya.
Iji mee ka ọ dị mfe, ị gafere faịlụ ọ bụla na pandoc (ma obu na Markdown ma obu na reStructuredText ma obu ndi ozo nke pandoc na akwado) ma gbanwee ya ka ọ gwụchaa, dịka - ọ dị onye ọ bụla dị njikere? -
LaTex, HTML larịị, PDF, DocBook, OpenDocument, docx, rtf, mmadụ, ederede larịị na ihe ruru atọ dị iche iche nke HTML ngosi; na ndeputa m di mkpụmkpụ, dị mkpụmkpụ Nke a bụ eserese nke gosipụtara ike ya:
N’ikpeazu, ọ bụ ọba akwụkwọ Haskell (ma ọ bụ ụlọ ahịa akwụkwọ, kpọọ ya ihe ị chọrọ); enwere ike itinye ya na koodu nke mmemme ndị ọzọ. Hakyll Ọ bụ otu n'ime ndị a na-erigbu, nke a bụ ihe nchịkwa peeji nke na-eji pandoc nwere ike ịgbanwe site na Markdown na-adịghị njọ na ụfọdụ LaTex na HTML dị ọcha.
Ebe a ndepụta saịtị ndị jiri ya dị ka saịtị nkeonwe, n'ụdị blog.
Ma ọ mara mma ngwa ngwa, iji mechaa ya. Na agbanyeghị uru ndị a niile, ọ dị ka ọ na-agbasawanye na mba Anglo-Saxon na ebe a enweghi ozi ọ bụla dị, dị ka -ọ na-ewutekwa ụdị ngosi a. Eleghi anya ọ bụ n'ihi na onye ndu ya na Bekee.
N'ezie a ga-enwerịrị. Ewezuga mgbasa dị mkpụmkpụ ya, ọtụtụ ndị nkwusa anaghị akwado ya.
Vim nwere syntax na-egosipụta na Markdown na obere ihe na ndabara, yabụ anyị na-atụfu ụfọdụ n'ime ihe ndị mara mma banyere pandoc: agbatịkwu ya.
Ihe anaghị etolite na mbụ Markdown na nke na-eme ka ndụ anyị dị mfe, dị ka tebụl, amaokwu, nkọwa ala, HTML na LaTex n'ime koodu ahụ, metadata na njirimara ndị tozuru oke.
Site n'ụzọ, Emacs nwere uru ebe a. Ọ nwere ọnọdụ Markdown nke na-enye anyị nkọwapụta nkọwapụta na iwu ole na ole bara uru, mana enwere ọnọdụ pandoc zuru ezu, nke onye Vim ya na ya ka nwere ike ịsọ mpi.
Ọ bụrụ na ị ka nwere mmasị ị nweta ya n'ime Vim, lee faịlụ syntax ahụ. Maka emacs ị nwere ịwụnye usoro akara na pandoc, dị ka ekwuru ya.
Nnennen ruo isi
Achọpụtara m pandoc mgbe m na-achọ ngwugwu ederede2tags (onye ntụgharị ọzọ mana amachi) en crunchbang ma ugbu a, m maara na ọ bụ dị na Debian mụ na aha, maa ihe, pandoc. A aptitude wụnye ezu maka nke a. Ma ndị anyị na-eji Archlinux anyị ga-ebu ụzọ tufuo ihe ndọghachi azụ.
Na dependency hell
Ihe mbu anyi na-eche banyere bu ime pacman -S pandoc. Ọfọn, mba. Enweghi ngwugwu na ulo oru ndi ozo ma AUR adighi aru oru, n'ihi otutu ihe ndi mmadu choro. Ọ bụrụ na ị maraworị ihe banyere Haskell, ị ga-eche ugbu a na cabal ga-edozi ya. Na ee, ma na ndoputa. Iji mee nke a, ị ga-agba ọsọ na-esonụ:
sudo pacman -S ghc cabal-wụnye cabal melite cabal wụnye pandoc
Nke a kwesịrị ịrụ ọrụ mana anaghị m akwado ya. Karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye n'ụwa nke Haskell, n'ihi na nke a ga-ewetara gị nsogbu ndị na-emenye ụjọ n'ọdịnihu.
O doro anya na ọ bụ ihe ijuanya ịnụ mkpesa banyere ArchLinux na nkà ihe ọmụma ya, mana ọ dị m ka ọ bụ nzuzu zuru oke iji wepu ngwugwu haskell-platform site na ebe nchekwa, nke nyere gburugburu ikpeazu zuru oke ma dakọtara na ibe; gini mere ghc na cabal-awụnyere na emelitere.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịwụnye nchịkọta ndị ọzọ site na iji cabal, ọ kachasị mma ibudata nchịkọta ochie ghc na cabal-wunye site na Arch Rollback igwe.
Anyị na-etinye ha na pacman dị mfe -U ngwugwu-ụzọ anyị na-eme pacman ka ọ ghara ileghara ha anya mgbe ị na-emelite usoro ahụ, na faịlụ /etc/pacman.conf; n'ime ngalaba ElegharaPkg.
Ugbu a, anyị nwere ike iji cabal wụnye pandoc na ka ọ rụọ ọrụ dị ka o kwesiri, anyị tinyere akara a na faịlụ anyị .bashrc:
mbupụ PATH = ~ / .cabal / bin: $ PATH
Ma nke ahụ bụ ya. Ihe dị anya, mana anyị na-ezere nsogbu. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibido na nchịkọta ndị ọzọ, kama ịwụnye ha na mpaghara gị, ịnwere ike iji ya Obinna iji mepụta gburugburu ebe dịpụrụ adịpụ ma zere isi ọwụwa nke ịwụnye, dịka ọmụmaatụ, Hakyll.
Ma ozugbo m dọrọ gị aka ná ntị na ọ jọgburu onwe ya. Ihe a niile n'ihi na Haskell na Cabal azabeghị ndabere nke mmụọ nke asụsụ ndị ọzọ tụfuru, dị ka Ruby na Bundle na bara nnukwu uru. Ka o sina dị, obere ihe ngwọta a m ji ya ụgwọ Ian Ross kwuru nke ìgwè Hakyll.
Nwee ndidi. Ọ bụ ogologo tinye, n'ihi na ọ na-agbakọta ya maka anyị.
Jiri na nkwubi okwu
Na-a ọnụ na-eziga iji dị ka nke a:
pandoc -o mmepụta-file.ext -i original-file.md
Ebe Markdown (* .md, bụ ndọtị nke m na-eji) nwere ike dochie anya na ụdị ọ bụla ọzọ na .ext ọ bụla ọzọ dị na mmepụta.
Maka m, na m na-eme nke a kwa ụbọchị, o nyeere m aka nke ukwuu, ọkachasị na mbupụ na OpenDocument.
Ihe ndi ozo bu ihe di egwu. MacFarlane n'onwe ya mepụtara wiki na Haskell, nke Pandoc na-eji gbanwee peeji ya, mana nke ahụ bụ maka akụkọ ọzọ. Site n'ụzọ, ejiri mpako dee akwụkwọ ozi a na Pandoc, dị ka ọtụtụ n'ime ndị m degoro ugbu a,
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Pandoc na amaghi ebube
Ana m ejikwa Markdown. Kate na Gedit nwere ike itinye ngwa mgbakwunye iji gosipụta syntax. Mgbe ahụ iji tọghata ya na ODT m na-ahọrọ maka MultiMarkdown, ọ bụ nke kachasị, otu esi ekwu ya, "na - asọpụrụ ederede" nke mere na mgbe ị na - edegharị ya na akwụkwọ nwere ụdị paragraf ọ nwere ntụsara ahụ. Pandoc enyebeghị m otu ihe ahụ, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ amaghị m otu esi eme ya 😛
Nwere ike ime Pandoc were naanị ọkọlọtọ Markdown, site rụọ ọrụ –nke nhọrọ; ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị na-ekwu. Otú ọ dị, isi uru ya bụ ntụgharị n'etiti usoro.
Nwere ike ikwu na ọ, na obere na m hụrụ na ha na-eji ya, ọ emerụghị m ahụ.
Ejirila m ya si na LaTeX gaa reStructuredText. Ọ na-eme ya nke ọma (ọtụtụ oge xD)
Mmasị, ekele maka ịkekọrịta.
Etu esi etinye ndị ọrụ na-ejikọ site na SSH
Imirikiti Na-agụ na Ka Anyị Jiri Linux: Septemba 2012